Dagaalyahano katirsan Al-shabaab oo isku soo dhiibay Doowlada
Updated About:277 days ago 0
Hay’adda nabadsugida Qaranka ayaa maanta soo bandhigtay labo wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ka soo goostay kooxda al shabaab.
Labadan wiil ee dhalinyarada ah ayaa lagu kala magacaaba Sakariye Aadan Nuur iyo Maxamed Cismaan oo ay shabaabku u yaqaaneen Daalibaan, Sakariye waxa uu ka howlgali jiray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelada dhexe halka Maxamed uu kooxda kala shaqeyn jiray dhanka howlada caasimada xilligii uu ka mid ahaa kooxdaasi sida ay warbaahinta u sheegeen.
Labadan wiil ayaa shacabka kacodsaday in ay dambiyada ka galeen intii ay la shaqeyn jireen kooxdaas in ay cafis u fidiyaan iyagoo balan qaaday in ay ka shaqeeynayaan danaha ummadda.
Khaliif Axmed Ereg Taliyaha ciidamada hy’adda nabad sugida Qaranka ee gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin soona dhaweenayaan dhalinyarada ka soo baxeysa kooxda shabaab wuxuuna tilmaamay in ay daryeel dhan walba ah u fidinayaan isagoo baaq u diray waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtoodu wali ku jiraan kooxdaasi in ay kala soo baxaan si loogu sameeyo dhaqan celin.
Waxaa xusid mudan in Doowlada KMG ay mar walbo sheegto ineey daryeel iyo kaalmo ufidineeyso dhalinyada kasoo goosata Al-shabaab,xaqiiqduna ay tahay in afka uun ay saraakiisha dowlada hadal mac kasheegaan,taas badalkeedana ay uladhaqmaan sikaduwan.
Dhalinyarada ayaa lagu qasbaa ineey lashaqeeyaan hay’ada nabad sugida oo ay ku raadiyaan meelaha laga heli karo dagaalyahanadii iyo madaxdii ay kasoo goosteen hadii kale ay xabsiga dhigayaan,taasoo noqoneeysa in qofkii kasoo goosta Al-shabaab uusan marna badbaadeen oo uu hadaf unoqonayo labada dhinac.